ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၂၀)ပတ်မှ (၂၃)ပတ်အတွင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းဟာ ဘာတွေ ခံစားရတတ်သလဲ? – BurmeseHearts
ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၂၀)ပတ်မှ (၂၃)ပတ်အတွင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းဟာ ဘာတွေ ခံစားရတတ်သလဲ?
ကိုယ်တွင်းဟော်မုန်း မမျှတတာကြောင့် မိခင်လောင်းဟာ ခေါင်းက ဆံပင်ကျွတ်တာမျိုး ကြုံတွေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ပေါ်က အမွှေးအမျှင်တွေကတော့ ထူထဲလာတာမျိုးတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တုန်း တခဏတာဖြစ်တဲ့အတွက် စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။ကလေးမွေးပြီးလို့ ရာသီပြန်ပေါ်လျှင်ဖြင့် ယခင်အတိုင်း သူ့အလိုလို ပြန်ဖြစ်သွားမှာပါ။ H)
BurmeseHearts	 Jul 7, 2016 0